Ogige ugbo ala
Amazon (NASDAQ: AMZN) taa kwupụtara ọkwa ikuku ọhụụ na ọrụ ike ọkụ itoolu na US, Canada, Spain, Sweden na UK. Companylọ ọrụ ahụ nwere 206 mmeghari ohuru ume oru zuru ụwa ọnụ, tinyere 71 ịba uru-ọnụ ọgụgụ ifufe na anyanwụ oru na 135 anyanwụ ụlọ n'elu ụlọ ọrụ na stor ...
Gini kpatara iji jiri igwe eji eme ihe?
Ofdị fencing ị wụnye na-ekpebi ogo nchebe ị nwere ike ịtụ anya ya. Ogige dị mfe nwere ike ọ gaghị ezu. Weld ntupu, ma ọ bụ welding mesh panel fencing, bụ nhọrọ nke nhọrọ nchebe nke na-enye gị obi ike ịchọrọ. Gịnị bụ welded waya ntupu nsu? Welded waya ntupu bụ maka ...
Olee otú iji wụnye yinye njikọ nsu
ANATOMY OF A Chain LINK FENCE STEP 1 Gbakọọ ego ole ị chọrọ ● Kaa kpọmkwem ebe ị chọrọ ịchọta nkuku, ọnụ ụzọ na njedebe posts na agba agba ma ọ bụ ihe yiri ya. Tụọ ngụkọta ogologo n'etiti ọgwụgwụ posts. ● will ga-enwe ike ịtụ ihe ziri ezi ogologo o ...
Kedu ka fencing anyanwụ si arụ ọrụ?
- Uru na ngwa Gini bu fencing nke igwe? Nchebe aburula ihe di nkpa n’oge ugbu a ma ichota nchekwa nke ihe mmadu, ihe ubi, ndi ochichi, ulo ahia, na ihe ndi ozo aburula onye obula. Anyanwụ fencing bụ a modernized na unconventional usoro nke bụ otu n'ime t ...